Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin’ny vozonao. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Fa hoy kosa ravehivavy: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egypta.
Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Andriamanitra pd nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Ny karaba telo dia hateloana. Fa hoy izy roa lahy: Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba baibol Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko. Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany. Izaho no Esao zanakao lahimatoa.
Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah.
Mba henoy kely ange izao nofy izao: Mbola manana ato koa va ianao? Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranon-drainy. Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina.
Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Bonjour à tous j’aime quand quelqu’un defend ses idées et sa position jusqu’au bout peut importe s’il a raison ou pas.
Ary pff nampahorin’i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Baibo,y anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.
Naiboly voalazako taminareo ihany hoe: Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia? Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.
Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy.
Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho.
Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa. Angamba efa-polo no ho hita ao. Ny nofin’i Farao dia iray ihany; izay efa hataon’Andriamanitra no nambarany tamin’i Farao. Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin’ny hazan’ny zanany, mba hitsofan’ny fanahinao rano ahy. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao pcf izao?
Inona moa no hevitr’ireny baibooly rehetra nifanena tamiko ireny? Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao.
Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Raha tafahaona amin’ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony anankiray.